Namuhla ukuthi yini Signa (futhi Saina) - lokhu lifana ukungazi, isibonelo, lokho-Inthanethi noma i-laptop. With ukuthuthukiswa ukuxhumana nomphakathi (Twitter, vkontakte, Facebook ne Instagrama) ukuthandwa lezi zithombe isipho kuphela anda. Ukwanda kwaleli esiginali emzimbeni futhi ukhuluma futhi kangangokuthi manje zidayiswa kahle amantombazane (isibonelo, ngezwi VKontakte).
Lolu phawu (njengoba isiginesha noma uphawu) - uphawu nge ngolimi lwesiNgisi. Ngokuvamile ku ishidi noma emzimbeni abhalwe igama lomunye noma isidlaliso, bese wenza isithombe efanayo. Ekuqaleni, lezi zipho amantombazane eyinqaba ukwenza nje ukuze ajabulise abangane bakhe okuhle, guys, noma wasebenzisa kakhulu kwezinye izindawo. Signa emzimbeni abadalwanga noma lushintshwe abahleli ingcaca, kuba isici zabo eziyinhloko. Umbhalo emzimbeni noma ishidi ukuze kube khona. Lona omunye amaphuzu ayinhloko impendulo yombuzo othi lokho Signa.
izithombe ezifanayo ne amamaki of igama elithile emzimbeni kakhulu ukusiza kahle guys ukuqinisekiswa nomzimba ukuhlolwa amaziyo abayitoho ku-intanethi. Uma zibambene engxoxweni emnandi kunoma iyiphi yokuxhumana, ubone onawo, ngaphandle osheshayo ingxoxo yevidiyo, ukhetho best okungase kubhekwe njengenkonzo isicelo ukuze CIGNA kusukela kumngane. Ngakho kungenzeka ukunquma hhayi "isehlukaniso" Ingabe ngengozi ke kahlanekezeli ezinye amahlanu. Abanye abafana fastidious ngokusebenzisa lolu hlobo izithombe kungacacisa ukuthi kungakanani bathanda le ntombazane (ikakhulukazi ukugxila ivuliwe sibalo).
intombazane ezingavamile akazi ukuthi Signa futhi kungani idingeka, ngakho zonke lwesithathu okungenani oyedwa isithombe esinjalo. Eqinisweni Sain amantombazane bayenze ngezinye izikhathi ngenxa nje umuzwa friendly efudumele, ngenkathi Akubalulekile wazala umzimba wakho siqu, futhi kungenzeka ukudweba cute negama ingalo zakho noma basebenzise ephepheni.
Uma nje i-Inthanethi, kukhona izintombi ngeshwa, lezi izindlela ezingalungile zokuthola nomholo uzoba nelungelo ekuphileni. izintokazi engumthengisi zimba ngale ndaba, ngakho abanye baye baqala ukwenza imali enjalo. Ukuze uthole umfana ukuthi isizathu ukuba azisuthise futhi ubonise umphakathi wakhe anakho umngane cool ezifana, ngenzile Signe ngempela nengane ngokukhululekile. izithombe Okufanayo ungenza guys inqwaba amavoti VKontakte. Signa Original ayabiza kunamawashi izithombe ezivamile, kodwa siyini lesi okwakhe kakhulu kulezi izithombe - kuncike umcabango zonke intombazane. Nokho, njengoba kunoma iyiphi enye yezinzuzo, ngaphandle ukukhwabanisa futhi ngeke benze lapha. Abanye ladies abathanda ukuthola nje amavoti abo, kodwa ngezithombe CIGNA ekuphenduleni awuthunyelwa. La mantombazane aba nesu kakhulu futhi engumthengisi: ungabonisi ngokwabo, futhi ngesikhathi esifanayo uthole simpleton kungenziwa ukuseshwa Nokho nsuku zonke!
Manje, uyini Bel cishe kuyaqondakala. By endleleni, kodwa kukholakala ukuthi lezo zithombe ngamanothi lalivela e amanethiwekhi omphakathi. Ngomqondo onabile, kungenzeka, unikezwa isikhathi ukuthi lezi zinsiza kukhona okungcono ukuphola sites.
Konke ngokuqinisileyo: ticket.ru. Izibuyekezo
Yini umbuzo ukubuza intombazane "Sprashivai.ru»? Sonke kwenyukile wena!
Recipe fajitas yenkukhu kanye yenkomo
Isibizo Somsebenzi: Impi Yanamuhla 3. Ukuhamba kwemidlalo